Izigodlo ezibaluleke kakhulu eNdiya | Ukuhamba kwe-Absolut
Izigodlo ezibaluleke kakhulu eNdiya
maruuzen | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 11/03/2021 11:16 | India
India yizwe elikhulu elinamasiko ahlukahlukene futhi amahle. Inabantu abangaphezu kwezigidi eziyi-1.400 futhi iyisizinda samasiko kule ngxenye yomhlaba, ikakhulukazi uma sikhuluma ngobuBuddha, ubuHindu nezinye izinkolo.
Ukwakhiwa kwezwe kukhombisa umlando walo, ngakho-ke namuhla sizokwazi izigodlo ezihamba phambili eNdiya. Impela, uma ungakahambi ohambweni okwamanje, uzogcina unesifiso esikhulu sokupakisha ipotimende lakho noma ubhaka wakho, goma futhi uthathe indiza.
2 Izigodlo zase-india
3 Isigodlo saseMysore
4 Isigodlo se-Imaid Bhawan
5 I-Udaipur City Palace
7 Isigodlo saseChowmahalla
8 IJaipur City Palace
10 ILake Palace noma iJag Niwas
11 Isigodlo saseFalaknuma
12 Isigodlo seRambagh
I-India injalo eningizimu yezwekazi lase-Asia futhi unqamula amazwe akhona njengamanje ePakistan, Nepal, China, Burma, Bangladesh naseBhutan. Ezandleni zezikhulu ezahlukahlukene kwafakwa kancane kancane kuMbuso WaseBrithani, ukufeza ukuzimela kwawo okuphelele maphakathi nekhulu lama-XNUMX.
Uqinisekile uyazi Gandhi nokunyakaza kwayo ukuzimela ngaphandle kodlame. Umphumela waba ubukhosi baseNdiya, izwe namuhla yakhiwa izifunda ezingama-28 nezindawo eziyisishiyagalombili, esebenza njengentando yeningi ephalamende futhi enomnotho okhulayo futhi obalulekile.
Kodwa-ke, i-India inezinye izici njengoba ingakwazanga ukuphuma ku ukungondleki, ukungafundi kanye nobuphofu. Kuyindida, ngoba ngasikhathi sinye ukuthi umnotho wayo awuyeki ukukhula futhi unezikhali zenuzi… yizwe elinabantu abampofu ngokwedlulele futhi kwalasha omkhulu kwezomnotho.
El ifa lamasiko e-india lihle kakhulu futhi okwedlule okukhazimulayo kubonakala enanini elimangazayo lezigodlo nezithabathaba zemizi ezakhiwe ngamakhosi, izikhulu kanye namaharahara abake babusa njengamakhosi aphelele ala mazwe.
Lesi sigodlo senzelwe ngaphakathi 1912 ngumdwebi waseBrithani. Bebeyiminyaka eyi-15 besebenza njalo futhi umphumela uyisakhiwo ukuthi hlanganisa izitayela: AmaSulumane, amaGothic, amaRajput namaHindu. Abanikazi bayo babengamalungu omndeni wakwaWodeyars, umndeni wasebukhosini waseMsore.
Namuhla isigodlo sisesimeni esihle: a isigodlo samatshe esinezitezi ezintathu ngamagceke amaningi, izingadi kanye nemipheme, ngaphezu kwegalari yezithombe zasebukhosini. Isakhiwo sesigodlo sihlanganisa namathempeli ayishumi nambili amaHindu.
Ukuvakasha kuvunyelwe kepha awukwazi ukuthatha izithombe ngaphakathi. Kuvulwa nsuku zonke kusukela ngo-10 ekuseni kuye ku-5: 30 ntambama. Njalo ngeSonto nangamaholide isigodlo sikhanyiswa ngamalambu ayizinkulungwane eziyikhuluKuhle! Kusuka ku-7 kuye ku-7: 45 ntambama.
Isigodlo se-Imaid Bhawan
Lesi sigodlo sisedolobheni elaziwa kakhulu laseJodhpur, eChittar Hill. Njengoba isigodlo sangaphambilini siyi- Isakhiwo sekhulu lama-XNUMX, kusukela yaqedwa ngo-1943. Kusenjalo nanamuhla ingenye ye Izindawo zokuhlala ezinkulu kunazo zonke emhlabeni, ezinamakamelo angama-347.
Namuhla i-Imaid Bhawan Palace isezandleni zikaMahraja Gaj Singh futhi unomnyuziyamu neqoqo elicebile lamawashi, izithombe, izimoto zakudala nezingwe ezigqumisiwe. Lesi sigodlo sinendawo engaphandle kanokusho nengaphakathi elihlanganisa isitayela se-Art Deco saseNtshonalanga nemvuselelo yakudala namanye amaNdiya.
Isigodlo naso kufaka phakathi ihhotela elinamakamelo angama-64 kuphela, ephethwe yiTaj Hotel chain.
I-Udaipur City Palace
Lesi sigodlo sidala ngoba eyangekhulu le-XNUMX leminyaka. Kusentabeni futhi kunombono omuhle we-Udaipur, uhla lwezintaba i-Aravali kanye neLake Pichola. Ibuye ibe nokuhlanganiswa okuhle kwezitayela zikaMughal noRajasthani.
Lesi sigodlo sinezinto zangaphakathi ezinhle, ezinezibuko eziningi, izindonga ezibunjiwe, izimabula, izinto zesiliva, nedamu elingenamkhawulo elihlanganisa amakamelo. Kuyindawo ethandwa izivakashi futhi kuyindlela enhle yokuthola ukunethezeka kwasebukhosini, kulokhu kusuka kubukhosi bakwaMewar.
ICity Palace ivulwa zonke izinsuku zesonto, kusuka ngo-9: 30 ekuseni kuya ku-5: 30 ntambama.
Lesi sigodlo kwake kwaba ngesikaMaharaja waseGwalior. Kuvela ku- Ngekhulu le-XNUMX futhi kunjalo Isitayela saseYurophu. Inezitezi ezintathu futhi ihlanganisa nezitayela zokwakha. Esitezi sokuqala isitayela sikhumbuza iTuscany, esesibili yi-Italian ngaphezulu, enezinsika ze-Doric, kanti eyesithathu inesitayela esingaphezulu saseKorinte.
Into enhle ngesigodlo yinhle Igumbi le-Durbar, enamagolide amaningi, amakhandlela namafolda aluhlaza. Namuhla sekuyimnyuziyamu lapho ungabona khona iqoqo elihle lezikhali zasendulo, imibhalo yomlando nezinto zomlando.
Lesi sigodlo sivulwa kusukela ngo-Ephreli kuya kuSepthemba kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-4: 45 ntambama, kuthi ngo-Okthoba kuya kuMashi sivulwe kusukela ngo-10 ekuseni kuye ku-4: 30 ntambama, kodwa sivale ngoLwesithathu.
Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi kwakuyindawo yokuhlala esemthethweni yamaNizams wendawo. Inamagceke amabili, elinye lingaseningizimu linezigodlo ezine zesitayela se-neo-classical, kanti elinye ngasenyakatho linomhubhe omkhulu onechibi nomthombo.
IHholo leKhilwat Mubarak liyamangalisa futhi kulapha lapho imikhosi nezenkolo ezisemthethweni zenzeka khona. Kulezi zinsuku, izivakashi zingahamba kuwo womabili amagceke zivakashele ihholo, elihlanganisa izitayela zikaMughal nezasePheresiya, njengesakhiwo sonke.
IChowmahalla Palace, ngokwezwi nezwi igama lisho izigodlo ezine, ivulwa nsuku zonke ngaphandle koLwesihlanu namaholide ezwe, kusukela ngo-10 ekuseni kuya ku-5 ntambama.
IJaipur City Palace
Ingesinye sezigodlo ezithandwa kakhulu eNdiya futhi omunye wabathandwa kakhulu. Yakhiwe ngaphakathi 1732 futhi kwakungekaMaharaja waseJaipur, uSawai Jai Singh II, inkosi iminyaka engama-45. Ngaphambi kokuba kube khona abanye, kodwa wayengowokugcina.
Ngo-1949 umbuso waseJaipur wajoyina iNdiya, kodwa lesi sakhiwo sahlala njengendawo yokuhlala umndeni wasebukhosini. Inhloboni yesigodlo? Ihlanganisa izitayela zokwakha, iYurophu, iRajput, iMughal. Inezingadi eziningi, amadokodo namathempeli.
Isigodlo saziwa ngesaso ama-catwalks aklanywe njengamaphikoko. Ukubona indawo kuvunyelwe kusukela ngoMsombuluko kuya ngeSonto kusuka ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama.
Lesi sigodlo sihlaba umxhwele futhi sisezingeni elikhulu kakhulu. Kuthiwa futhi iyindawo yokuhlala yabantu enkulu kunazo zonke kusukela lapho liphindwe kane ubukhulu beBuckingham Palace.
Kwakuyindawo yokuhlala esemthethweni yomndeni wasebukhosini waseVadodara futhi izindlalifa zabo zisahlala lapha. I- isigodlo Inezakhiwo eziningana, izigodlo, imnyuziyamu nakho konke kunefenisha, izinto zobuciko nemidwebo evela kuwo wonke umhlaba.
Ingaphakathi lihle kodwa nengaphandle lakhona, nezingadi zalo ezenziwe zaba manzi, kanye no Indawo yokudlala igalofu Izimbobo 10. Ngenhlanhla, isigodlo sivulekele izivakashi, nsuku zonke ngaphandle kwamaholide nangoMsombuluko, kusukela ngo-9: 30 ekuseni kuya ku-5 ntambama.
ILake Palace noma iJag Niwas
Kusechibini iPichola futhi Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX. Kwakungekomndeni wasebukhosini wakwaMewar futhi namuhla usebenza njenge- ihhotela likanokusho ngemabula emhlophe eningi. Inamagumbi nama-suites angama-83 kanti bathi ingenye yamahhotela athandana kakhulu akhona.
Njengasemaphethelweni echibi i ukugibela isikebhe yizinto ezivamile zosuku. Iqiniso: ngo-1983 kwakuyindawo yefilimu kaJames Bond i-Octopussy. Okwabo izivakashi ezithandwa kakhulu kwakunguNdlovukazi u-Elizabeth, uVivien Leigh noma UJaqueline Kennedy.
Lesi sigodlo naso siguqulwe saba ihhotela likanokusho. Isochungechunge lwehhotela laseTaj Hotels, kusukela ngo-2010, futhi lihle kakhulu. Yakhiwe egqumeni cishe amamitha ayi-610 ukuphakama futhi ngaleyo ndlela inemibono emihle yePearl City eyaziwayo.
Ngaphakathi kunamakhandlela eVenice, izinsika zaseRoma, izitebhisi zemabula, izithombe eziqoshiwe yonke indawo, nefenisha yesitayela. Ibuye ibe nezingadi zaseJapan, izitayela zikaRajasthani nezitayela zikaMughal.
Lesi sigodlo sasike saba yindawo yasebukhosini yokugcina iMaharaja yaseJaipur. Kusukela ngo-1857 iyihhotela futhi eqenjini leTaj Hotel. Amakamelo alo aguqulwa aba amasudi futhi namuhla izivakashi zihamba emaphaseji emabula amahle nezingadi ezinhle.
Lezi ngezinye nje ze izigodlo ezihamba phambili eNdiya. Kunezinye eziningi, njengoba ingcebo yamakhosi endawo yayinkulu. Ngenhlanhla basindile kuze kube namuhla futhi ngandlela thile, noma ngabe izivakashi noma njengezivakashi ezinenhlanhla, sisengabavakashela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izigodlo ezibaluleke kakhulu eNdiya
Isimo sezulu saseColombia